Hamro Kantipur | साउनभित्रै ५० लाख मात्रा खोप,को-को छन् प्राथमिकतामा ? साउनभित्रै ५० लाख मात्रा खोप,को-को छन् प्राथमिकतामा ?
साउनभित्रै ५० लाख मात्रा खोप,को-को छन् प्राथमिकतामा ?
काठमाडौं , देशभर कोरोना भाइरस संक्रमणविरुद्ध खोप लगाउन योग्य २ करोड ९ लाख ९६ हजार ८ सय ९ जना नागरिक खोपको प्रतीक्षामा छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको कोभिड–१९ खोपका लागि लक्षित समूहको प्राथमिकीकरणअनुसार अनुमानित २ करोड १७ लाख ५६ हजार ७ सय ६३ जनालाई खोप लगाइनेछ ।